२ सांसदसहित ११ जनाको आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ — Imandarmedia.com
२ सांसदसहित ११ जनाको आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ
काठमाडौँ । प्रदेश नंं ५ को बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने सांसद, सुरक्षाकर्मी, सचिवालयका कर्मचारी तथा पत्रकारहरुको आज आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । संसद बैठक हुनुपूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको हो ।
बिहीबार ३ सय ९८ जनामा गरिएको आरडिटी परीक्षणमा सांसद र सुरक्षाकर्मी गरी ११ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । उनीहरुलाई पिसिआर परीक्षण गरिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले बताए । जसमा २ जना सभासद, २ जना चालक र अन्य कर्मचारी रहेका छन् ।
४० जना पत्रकारको परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । शुक्रबारदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ । आज रिपोर्ट पोजेटिभ आएकाहरु भने होम क्वारेटाईनमा बस्नेछन् । यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ सय ५३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार दिउँसो थप ९ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले झापामा ८ जना पुरुष र रुपन्देहीका १ पुरुषमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार रुपन्देहीका २७ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । उनी श्रीलंकन गेस्ट हाउस क्‍वारेन्टाइन लुम्बिनीमा रहेका थिए भने झापाका १७ वर्षीय पुरुष, १८ वर्षीय दुई जना पुरुष, २० वर्षीय २ जना र २३, ५२ र ५५ वर्षका पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । उनीहरु सबै लक्ष्मी देवकोटा मावि क्‍वारेन्टाइन कचनकवल झापामा रहेका थिए ।
संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये हालसम्म ४९ जना निको भएका छन् भने सिन्धुपाल्चोकमा एक र बाँकेमा एक, गुल्मीको एक गरी ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट ७८ हजार ६ सय ९५ नमुना परीक्षण भएका छन् । पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म ३८ हजार ७ सय ३६ परीक्षण गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गराइरहेका चार जना कोरोना भाइरस संक्रमित बिहीबार डिस्चार्ज भएका छन् । पछिल्ला दुईवटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरु डिस्चार्ज भएका हुन् । डिस्चार्ज हुनेमा दुई जना भक्तपुरका र दुई जना काठमाडौंका रहेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज राजभण्डारीका अनुसार डिस्चार्ज हुने दुई जना पुरुष र दुई जना महिला छन् । टेकु अस्पतालमा गत ३१ वैशाखमा भक्तपुरका एक पुरुष र एक महिला, काठमाडौंका एक महिला भर्ना भएका थिए । त्यस दिन भर्ना भएका संक्रमित पुरुष सशस्त्र प्रहरी हुन् ।
महिला एक जना आरोग्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । अर्की एक महिला चन्द्रागिरी निवासी हुन् । थप एक जनाको भने विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । उनीहरु नवौं दिनमा डिस्चार्ज भएका छन् । अस्पतालमा थप एक जना संक्रमित उपचारको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । यो चार जनासंगै कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारपछि डिस्चार्ज हुनेको संख्या ४९ पुगेको छ ।
फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै नेपलामा,अब के हुन्छ ?
नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
मौसम सम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो जानकारी, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ असिना पानी ?
जलबीरे पुल तयार, २६५ मिटर दूरी छोटियो,कहिले बाट पुल सञ्चालन गर्ने तयारी
भारतले किन दिदैछ १८ वर्षभन्दा मुनिका सबैलाई कोरोना खोप ?
नेपालमाआज सार्वजनिक बिदा
कोरोना महामारीकाबीच आज सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा, राष्ट्रपतिले दर्शन गर्ने